Warshadaha Nidaamka Rack-ga Shiinaha iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Qaab dhismeedka shabakadda birta waa qaab dhismeedka bannaan oo ka kooban dhowr xubnood oo shabakad ah oo ku xiran noodhadhka kubbadda qaab shabag gaar ah. Shiinaha wuxuu bilaabay inuu soo bandhigo tiknoolajiyada qaabdhismeedka xargaha birta iyo wax soo saarka dibedda 1978, oo leh faa'iidooyinka baaxadda weyn ee gudaha, miisaanka fudud, waxqabadka dhul gariirka wanaagsan
Qaab dhismeedka siligga birta waa qaab dhismeedka qaabeysan oo lagu sameeyay isku xirka xubno badan oo shabakad ah iyada oo loo marayo kala-goysyada wareega iyadoo loo eegayo qaab shabaq gaar ah. Shiinaha wuxuu bilaabay inuu ka soo dejiyo tiknoolajiyada qaabdhismeedka xargaha birta iyo wax soo saarka dibedda 1978. Qaab dhismeedka xargaha birta wuxuu leeyahay faa'iidooyinka baaxadda weyn ee gudaha, miisaanka fudud, waxqabadka dhul gariirka wanaagsan iyo amniga sare.
Qaab dhismeedka shabaggu waa nooc ka mid ah qaab dhismeedka nidaamka baararka, iyo xubnaha culeyska qaba waxay ku xiran yihiin kalagoysyo sida waafaqsan qawaaniinta qaarkood. Kala-goysyada waxaa guud ahaan loogu talagalay sidakala-goysyada isku laalaada, xubnahan inta badan waa la hoos galiyaa xoog axial, iyo cabirka iskutallaabta xubnahu aad ayuu uyaryahay. Xubnahan ku kulma meelaha bannaan ayaa midba midka kale taageersanyahay, si isku mid ah xubnahan isku buuqay iyo kuwanidaamka taageeraya, sidaas qalabka la isticmaalay waa dhaqaale. Sababtoo ah isku-dhafka qaabdhismeedka joogtada ah, tiro badan oo xubno iyo noodhadh ah ayaa leh qaab iyo cabbir isku mid ah, kaas oo ku habboon wax soo saarka warshad iyo rakibaadda goobta.
Qaab dhismeedka shabakaduhu guud ahaan waa amar sare dhismayaasha aan la garan karin, kaas oo u adkeysan kara culeyska urursan, xamuulka firfircoon iyo culeyska asymmetric-ka oo si fiican u leh waxqabadka dhulgariirka. Qaab dhismeedka shabakadu wuxuu la qabsan karaa shuruudaha dhismayaasha dadweynaha iyo dhirta leh taako kala duwan iyo xaalado kala geddisan oo kala duwan, iyo sidoo kale diyaarado dhisme oo kala duwan iyo iskudhafyadooda. Bishii Meey 1981, Shiinaha ayaa soo saarayShuruucda Naqshadeynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Shabakadda (JGJ7-80). Bishii Sebtember 1991, Shiinaha ayaa dib u eegay oo baahisayShuruucda Naqshadeynta iyo Dhismaha Dhismayaasha Shabakadda (JGJ7-91). Bishii Luulyo 2010, Shiinaha ayaa soo saarayShuruucda Farsamada ee Qaabdhismeedka Meelaha Meelaha (JGJ7-2010) iyadoo la isku darayo qodobbada ku habboon ee qaababka shabakadda, qolof reticulated iyo qaababka tubbada tubbada rikoodhka ah. Intaa waxaa dheer, loogu talagalaykubbadda lagu xiray kala-goysyada iyo qalabkooda qaab-dhismeedka shabakadda, Shiinaha ayaa si gaar ah loo baahiyay Qaabdhismeedka Goobaha Goolalka ee Goolaca (JG / T10-2009) iyo handarraabbadeedii Xoogga Sare ee Isku-xidhka Dhismayaasha Shabakadda Goobta Cirka (GB / T16939-2016), Isku-xidhka wadajirka ah ee qaabdhismeedka shabakadaha iyo qalabkooda, Shiinaha ayaa soo saarey Noodhadh goobeed oo goobeed oo qaabaysan (JG / T11-2009). Qaar ka mid ah gobollada xitaa waxay soo saareen heerar maxalli ah oo wax soo saar wadajir ah, sida heerka maxalliga ah ee Gobolka JiangsuFaahfaahinta Farsamada ee loogu talagalay Madaxda Koorta ee isku-xidhka gooldhalinta goobeed ee birta birta ah (Shell) (DB32 / 952-2006). Heerarkan laxiriira waa soo koobid ku saabsan guulaha hadda laga gaadhay injineernimada qaabdhismeedka shabakadda iyo cilmi baarista sayniska ee waddankeenna, waxayna si xoog leh u dhiirrigelineysaa horumarinta qaabdhismeedka shabakadda waddankeenna.
Shirkaddu waxay leedahay 25,000m2 xargaha, tuubbada tubbada, foorarka kulul iyo seminaaro wax soo saar qalooca qabow. Shirkaddu waxay leedahay saddex xariiq oo wax soo saar shabag ah. Khadka ballaaran ee wax soo saarka shabakadda badanaa wuxuu ka shaqeeyaa shabakadda kubbadda cagta, shabakadda kubbadda dhejiska leh, tuubbada tuubbada iyo ganacsiyada kale, iyadoo laga warqabayo isku-xirnaanta qumman ee ka soo baxa balastarka, isku imaatinka, alxanka, toogashada toogashada, rinjiyeynta otomaatiga ah, qalajinta gaaska dabiiciga, baakadaha iyo rarka Waxay ku siin kartaa macaamiisha adeeg hal-joogsi ah.
Tiknoolajiyadda qaabdhismeedka iyo alaabooyinka: Iyada oo loo marayo ku-dhaqanka muddada-dheer, oo ah qaab dhismeedka qaab dhismeedka bislaaday, qaab-dhismeedka shabakadda birta ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay xarumaha kala duwan ee dhismaha dadweynaha sida warshadaha warshadaha waaweyn, baqaarada, daadadka dhuxusha waaweyn, guryaha saldhigyada, xarumaha ganacsiga. , hoolalka bandhig, jimicsi, xarumo carwo iyo saldhig tareen xawaare sare ku socda.
Qayb ka mid ah soo bandhigida qalabka shirkadda
Soo bandhigida kiiska qaybta sheyga shirkadda
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Zhejiang, Shiinaha
Bakhaarka Waxsoosaarka Macdanta
Mashruucu wuxuu ku yaal Shaanxi, Shiinaha
Mashruucu wuxuu ku yaalaa shanxi, Shiinaha
Mashruucu wuxuu ku yaalaa Guangzhou, Shiinaha
Hore: Soo-saarista shirkadda iyo hordhaca dhismaha
Xiga: Muuqaalka Qeyb Soosaarka Warshadda
Naqshadeynta Naqshadaynta Tuuboyinka
Naqshadaynta Tuuboyinka ee Staad Pro
Naqshadeynta Birta Birta
Naqshadeynta Tuuboyinka Qaabdhismeedka